Waa maxay saameynta sixirka ee carbomer?
Kapom meel walba ayey kaga taal nolol maalmeedkeena, miyaad ogaatay? Maanta waxaan ka baran doonnaa ISTICMAALKA kapomkan cajiibka ah ee lala yeelanayo Madaxweyne Hu qalabka cusub ee Inoxon. 1. Ka ilaali maqaarkaaga Kapok wuxuu leeyahay saameyn muuqata oo difaac ah maqaarka jirka aadanaha, wuxuu xiriir gaar ah u leeyahay maqaarka jirka aadanaha, hidda - wadaha ...
Soo koobista taxanaha PEG, miyaad dooneysaa inaad ogaato?
Peg-200: Waxaa loo isticmaali karaa dhexdhexaad ahaan isku-dhafka dabiiciga iyo xambaara kuleylka oo leh shuruudo sare. Waxaa loo isticmaali karaa sida humectant, dareeraha ku daraya milix dabiici ah iyo jaangooyaha nafwaayaha ee warshadaha kiimikada maalinlaha ah. Waxaa loo adeegsaday jilicsanaanta iyo wakiilka antistatic ee warshadaha dharka; Loo adeegsaday sidii ag qoynta ...
Fahmaan faa iidooyinka waxqabadka polyetylen glycol, soosaarka aasaas wanaagsan!
Polyetylen glycol (PEG) waa polymer ka kooban ethylene oxide iyo biyo. Waa firkin cadcad ama budo adag, ur lahayn ama ur liidata leh. Ma aha mid sun ah, oo aan xanaaq lahayn, waxay leedahay milmo wanaagsan oo biyo ah, waxayna leedahay iswaafajin wanaagsan qaybo badan oo dabiici ah. Waxaa si weyn loogu isticmaalaa qurxinta ...